बेलायतमा काम, दाम र नाम !
नाम कमाउने रहर कसलाई पो हुँदैन र ? आजकलको देखावटी दुनियाँमा नामको पछि लाग्नेहरुको संख्या निकै छ । नाम कमाउनु भनेको मान र सम्मान कमाउनु हो । नाम भनेको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि हो । आत्मासम्मान, आत्मारति र आत्मासन्तुष्टि जेका लागि भए पनि नाम कमाउनु छ । बस यहाँ सबैका लागि प्रतिष्ठा, मान, सम्मान लागि र केवल नामका लागि पनि नाम कमाउनु छ ।
काम, दाम र नाम एक आपसमा जोडिएका शब्दहरु हुन् । काम गरे दाम कमाइन्छ । सामान्यतया जति धेरै दाम कमायो उति नै धेरै नाम कमाइन्छ । धेरै दाम कमाउनेले नाम कमाउनुका पछाडी धेरै सामाजिक, ब्यबहारिक र आर्थिक पक्षहरु छन् । धेरै दाम कमाउने मानिसले आफ्नो कमाइको थोरै रकम मात्रै सामाजिक कामका लागि खर्च गर्यो भने उसले सजिलै नाम कमाउँछ । अनि दाम कमाउने व्यक्तिको चर्चा त्यत्तिकै पनि अरुको भन्दा धेरै हुन्छ । त्यो अर्थमा अहिलेको समाजमा जहाँ पैसा छ, त्यहाँ मान, सम्मान र प्रतिष्ठा पनि छ
आफ्ना र परिवारको आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा भए पछि मानिस आफ्नो र परिवारको आर्थिक अवस्था सबल गर्न तिर लाग्छ । अनि अधिकांशको लागि पालो आउँछ, नाम कमाउने । नाम कमाउने धेरै उपायहरु छन् । ति मध्ये अहिले बेलायतमा नेपाली समुदायमा कसरी नाम कमाउने चलन छ, यो लेखमा त्यसको छोटो चर्चा गर्दैछु ।
बिदेशमा बस्ने नेपाली मुलका बिदेशी वा नेपालीहरुले कडा मेहेनत गर्छन । नेपालीहरु परिश्रमी, इमान्दार र बहादुरको रुपमा विश्व भरि चिनिन्छन । जति मेहेनत गर्यो उति धेरै सफलता पाउन सकिन्छ । जति सफल भयो उति धेरै आर्थिक पक्ष पनि सबल हुन्छ । यो अर्थमा भन्ने हो भने नेपालीहरुलाई बिदेशमा काम पाउन, दाम कमाउन र अन्त्यमा नाम समेत कमाउन सजिलो पनि छ । यो सबैले जानेको सामान्य कुरा हो । अर्थात, जहाँ बसे पनि सबैलाई लागु हुने कुरा हो, कुनै नौलो तथ्य र बिषय हैन यो ।
नाम कमाउने सजिलो अर्को उपाय पनि छ । बेलायतमा नेपाली संघसंस्था खडा गर्ने, अनि पदमा बस्ने । नेपालीहरुको जातिय, क्षेत्रीय र पेशागत संघ संस्थाहरुको बिगबिगी नै छ बेलायतमा । बेलायतमा सयौको संख्यामा नेपाली संघ संस्थाहरु छन् । थोरै मात्रै संघ संस्थाहरु बेलायतको नियम र कानून अनुसार गठन भएर चलेका छन् । तर, धेरै जसो केवल एक दुई दर्जन व्यक्तिहरुको भेलाले गठन भएका र केवल नामका लागि खडा भएका संघ संस्थाहरु छन् । यो अर्थमा भन्दा विभिन्न संघ संस्थाहरु गठन गरेर पद सिर्जना गर्ने र नाम कमाउने होडमा केही लागेको अनुभुति हुन्छ ।
कुनै निश्चित उद्धेश्यका लागि वास्तविक रुपमा सामाजिक काम गर्ने, आफ्नो मातृभूमीका लागि ठूलो योगदान गर्ने संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु जो निस्वार्थ रुपमा काम गर्छन उनीहरु निश्चय पनि नाम, मान र सम्मानको लागि हकदार छन् । तर बिडम्बना यो संख्या निकै कम छ ।
बेलायतमा अर्को पनि तरिका छ नाम कमाउने, त्यो हो पत्रकार बन्ने । पत्रकार मित्रहरुलाई सबै संघ संस्थाहरुले गर्ने सबै जसो कार्यक्रममा अनिवार्य जस्तै आमन्त्रण गर्छन । त्यति मात्रै कहाँ हो र? सबै जसो पत्रकार मित्रहरुलाई ठूला ठूला प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले आफै घरमा भोज भतेरमा समेत बोलाउने प्रचलन छ । सबै तिर नाम आउने मानिस को हो भनेर सामान्य ज्ञानमा कसैले सोध्यो भने आँखा चिम्लेर भने हुन्छ पत्रकार । आजकालका सबै जसो सामाजिक संजाल हेर्ने हो भने पत्रकारको जति चर्चा र नाम शायद अरु कसैको होला ।
अनि पत्रकार मित्रहरुको नाम र कामको पछि थप्नु पर्ने अर्को पक्ष पनि छ । त्यो हो योग्यता को । सबै जसो पेसाको लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य जस्तै भए पनि पत्रकार मात्र यस्तो प्रतिष्ठित पेसा होला जसको लागि खासै कुनै शैक्षिक योग्यताको खाँचो छैन । बस, कुनै कुरा लेख्न जाने भए पत्रकार हुने पक्का छ । आजकल त अरु कुनै समाचारबाट कपि र पेस्ट गर्ने पत्रकार समेतको शहरमा बिगबिगी छ ।
यसको अर्थ पढेलेखेका पत्रकार बनेका छैनन् भनेको हैन । सत्य, तथ्य संकलन गर्ने र समाचार लेख्ने, पत्रकारिताको पेसालाई सम्मानित बनाउने, कुनै समसामायिक बिषयको विश्लेषण गरेर लेख्ने आदि पत्रकार मित्रहरु पनि छन्, जो नाम र दाम दुवै कमाउन लायक छन् । जे होस्, पत्रकार बन्न जति सजिलो छ त्यत्तिकै नाम कमाउन सजिलो छ । तर, दाम कमाउने बिषयमा भने म त्यसै भन्न सक्दिन ।
समाजमा पुण्य हुने काम वा शुद्ध समाज सेवा गरेर नाम कमाउनेको पनि कमि छैन बेलायत बस्ने नेपाली समाजमा । कसैले आफ्नो गाउँ ठाउँमा सहयोग गरेका छन् भने कसैले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मानव सेवामा सहयोग गरेका छन् । धेरै जसोले आफ्नो मातृभूमीमा कुनै आपत बिपतमा कुनै न कुनै सहयोग गरेका छन् । आफ्नो नाम प्रचार प्रसार गर्न चाहने धेरै समाज सेवीको नाम बाहिर आए पनि कतिपय गुमनाम किसिमले आफ्नै तरिकाले समाज सेवा गर्ने पनि छन् ।
आफ्नो पेसामा लागेर नाम र दाम कमाउने नेपाली मुलका बेलायतीहरुको पनि कुनै कमि छैन बेलायतमा । यो संख्या कम छ, तर आफ्नो पेसा र व्यवसायमा सफल भएका र उदाहरणनिय काम गर्ने नेपाली मुलका बेलायती वा नेपालीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ बेलायतमा । धेरै आशा लाग्दा नयाँ पुस्ताका नेपाली मुलका युवाहरु पनि उदयमान छन् । जसले भविष्यमा नाम र दाम कमाउने निश्चित छ ।
दाम कमाउने कुरा गर्ने हो भने नेपालमा जस्तै सजिलै रुपमा अनैतिक काम गरेर, दुइ नम्बरी धन्धा गरेर, कर छलेर, घुस खाएर वा अरु त्यस्तै काम गरेर बेलायतमा दाम कमाउन त्यति सजिलो छैन । यदाकदा नियमको गलत व्याख्या गरेर वा आँखा छलेर काम गर्ने भेटिए पनि यो संख्या निकै कम छ । बेलायतमा दाम कमाउने सजिलो र छिटो बाटो छैन । दाम कमाउने एउट्टै उपाय कडा परिश्रम र धैर्यता हो ।
जे होस्, काम, दाम र नाम कहिले संगै त कहिले अघि पछि हुन्छन । कामको पछि दाम लाग्छ । अर्थात, काम गर्दै जाने हो भने दाम पनि कमाउन सकिन्छ । काम वा दामको साथमा अलिकति थप मेहेनत गर्ने र भाग्य पनि हुने हो भने नाम पनि कमाउन सकिन्छ । तर, नाम मात्रै कुनै ठूलो कुरा हैन । नामका साथ आत्मासम्मान र आत्मासन्तुष्टि पनि उत्तिकै हुनु जरुरी छ ।